Sarintany Zeevou | Endri-javatra ho avy | Zeevou
Zeevou's Roadmap dia feno fiasa sy fahagagana mampientam-po. Miezaka hatrany izahay mba ho lohalaharana amin'ny indostria amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fanolorantsika sy hanosehana ny fetran'ny mety.
Ireo entana ao amin'ny sori-dalanay momba ny fivoarana dia asongadino laharam-pahamehana arakaraka ny tamberina nomen'ny ankehitriny antsika mpitsidika. Izahay dia mitazona Forum Mpanasa Mpanotrona mandritra ny telo herinandro, izay ifandraisanay amin'ireo mpampiantrano mpiara-miasa aminay ary ezahinay hamantatra hoe iza amin'ireo endri-javatra no zava-dehibe indrindra amin'izy ireo. Miorina amin'izany, manandrana mahazo fahatsapana izay asa ilaina maika kokoa izahay, ary ampiasainay hilazana ny filaharantsika ny endri-javatra amin'ny famoahana anay manaraka.
Mandritra ny fotoana maharitra dia manantena izahay fa afaka mamolavola rafitra iray izay ahafahantsika mandàka demaokratika an'io fomba io ary hanaraka tsara kokoa ny fahalianana amin'ireo endrika samihafa.
Ny ekipa mpanao majika dia mandaitra amin'ny zavatra ataony. We nanangona talenta tsara indrindra tany, ary nanangana ekipa mpamorona roa izay miasa araka ny fomba fiasa Scrum. Ny fananana ekipa mpamorona natokana roa ao an-trano dia midika fa afaka mampifanaraka haingana ny takian'ny tsena isika ary mamaly tsara ny fangatahan'ny mpampiasa. Miasa mandritra ny telo herinandro isan-kerinandro antsoina hoe sprint izahay, ary manavao ny tondrozotra indray mandeha indray mandeha faingana mba hanomezana anao hevitra momba ny zavatra iasantsika amin'izao haingam-pandeha izao (mitondra ny anarana hoe "Mivoatra"), ny zavatra ataonay mba hahazoana antoka fa manangana izahay ny fitaovana tsara indrindra ho an'ireo tranga fampiasana izay ezahinay harahina (mitondra ny lohateny hoe "Fikarohana"), inona ny fandaharam-potoana "Manaraka" (3-6 sprint manomboka izao), ary "Soon" (7-12 sprint away).
Miezaka ny hahay mangarahara araka izay azo atao amin'ny zavatra iasantsika izahay, ka manaparitaka ny Tondrozotra ho hitan'ny rehetra. Ny tondrozotra dia mailaka sy miovaova, midika izany fa afaka manapa-kevitra ny hamindra zavatra isika raha manapa-kevitra ny hiova ny laharam-pahamehana. Ny fizarana manaraka sy tsy ho ela dia manondro indrindra izany. Ny tsanganana "Eo an-dàlana" dia mametraka ny zavatra napetrakay ho tanjona hiasa amin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha ankehitriny. Na dia tsy afaka mampanantena aza izahay fa hoentina isaky ny haingam-pandeha ireo fiasa rehetra, dia manao izay tsara indrindra vitantsika izahay mba hahatratrarana hatrany ireo tanjona napetrakay taminay.
Raha manana sosokevitra ianao, midira azafady amin'ny Forum Partner Host manaraka. Raha mila horonan-tsary manazava fohy momba an'i Zeevou, kitiho Eto.
Tsy ho ela
Fepetra takiana amin'ny fandoavam-bola
Avelao ny mandeha ho azy manodidina ny fehezan-dalàna momba ny fandoavam-bola sy ny fanafoanana.
Manampia hetra ho toy ny foto-kevitra amin'ny famandrihana sy add-on.
Fitantanana ny lahasa
Avelao ny famoronana asa amam-panao sy ny fitantanana asa manatsara.
Daty voasakana amin'ny fiovam-po amin'ny famandrihana
Avelao ny fanovana ny daty voasakana ho famandrihana.
Ampifanaraho amin'ny Quickbooks Online ny Zeevou.
Fanatsarana ny môdely mailaka
Avereno jerena ireo hadisoan'ny tsipelina ao amin'ny maodelin'ny mailaka misy anao
Tsory ny famoronana modely mailaka namboarina
Mamorona modely fanaraha-maso mialoha ary alefaso modely fanaraha-maso
Fanatsarana ny fanamboarana
Atsaharo ny fivarotana & atsaharo ny famandrihana mailaka fanamafisana izay nateraka nandritra ny fametrahana.
Alefaso amin'ny sari-tany famandrihana marobe amin'ny famandrihana karazana singa tsy nasiana sarintany.
Fanatsarana ny fitsipika mifehy ny trigger
Alefaso ny fandokoana ny Fitsipiky ny Trigger
Manampia lalàna mifehy ny mpitsangatsangana
Manampia lalàna mifehy ny asa-mifototra amin'ny lahasa
Alefaso ny fepetra andavanandro
Manampia famandrihana tsy natokana ho mpanova
Amboary ny piraofilin'ny mpitsidika
Fampifangaroana ny mombamomba ny mpitsidika.
Avelao hamafana ny famandrihana.
Fampiharana finday (fikojakojana)
Izahay dia miasa amin'ny endri-javatra iray napetraka hamela anao hanome andraikitra ho an'ny mpiasan'ny fikolokoloana ary hahafahan'izy ireo mijery ireo sy hanavao anao ny fivoarany amin'ny alàlan'ny fampiharana finday.
Fanovana ny anaran'ny fikambanana
Avelao ny admin iray fikambanana hanova ny anaran'ny fikambanana.
Fitsipika momba ny orinasa
Alefaso ny fandavana ny fitsipiky ny fiarovana sy / na ny fanamarinana ID ho an'ireo vahiny mifandraika amin'ny orinasa manokana.
Fanatsarana ny R&A
Avelao ny fanondranana ny Kalandrie R&A.
Ahafahana ny daty tsy mandeha mainty hanilihana daty sasany amin'ny fampiroboroboana.
Alefaso ny fanovana daty fanombohana ao amin'ny Kalandrie R&A.
Alefaso ny sakana ambadika ahafahanao manakana ny daty na dia mifanindry amin'ny famandrihana efa misy aza izy ireo.
Lazao ny varavarankely famandrihana mialoha miaraka amin'ny fotoana tapaka.
Avelao ny famaritana ny R&A amin'ny fantsona.
Sakano mandeha ho azy x andro aorian'ny fizahana.
Avelao ny fanaingoana ny saram-pahafaham-bahiny fanampiny amin'ny alina.
Avelao ny sivana araka ny daty azo ampiharina ao amin'ny kitay misy.
Manangana rafitra fampandrenesana hahafahan'ny mpampiasa ampandrenesina amin'ny tranonkala sy finday amin'ny hetsika isan-karazany.
Famerenana endrika Hub
Avereno amboarina ny tabilao ao amin'ny Zeevou Hub hanome KPI sy widgets fanampiny.
Famerenana ny famandrihana
Mamolavola endrika ny pejy famandrihana mba hanomezana interface tsara kokoa ho an'ny mpampiasa.
Avelao ny famandrihana vondrona na amin'ny lafiny singa marobe amin'ny daty mitovy, ary koa ny famandrihana Mon-Fri miverimberina. Alefaso ny fampifangaroana ny faktiora ho an'ny famandrihana samihafa ho famandrihana iray.
Fanontaniana & Teny nalaina
Mamorona sata vaovao famandrihana roa - fanontaniana sy teny nalaina. Ny famotopotorana dia tsy tokony hanakana ny fisian'ny vidiny, fa ny teny nindramina kosa dia tokony.
Avelao ny mpampiantrano hamorona, hijery ary hanitsy famandrihana amin'ny finday.
Fanatsarana ny kalandrie R&A
Asehoy ny vokatry ny Fitsipika momba ny isa sy ny zaza Rateplans amin'ny kalandrie R&A.
Mamolavola endrika ny pejy lisitra mba hanomezana interface tsara kokoa ho an'ny mpampiasa.
Drafitra momba ny tahan'ny zaza
Avelao ny derivation tahan'ny eo anelanelan'ny drafitra tahan'ny.
Amboary mora kokoa ny manondro add-on fanadiovana ho an'ny karazana unit
Ataovy mandeha ho azy ny fizotran'ny fandoavam-bola ho an'ny fanampiana izay mila fankatoavana avy amin'ny admin
Fero ny fivarotana ny add-in aloha sy ny add-on add-on tara ho an'ny fanovana amin'ny andro iray ihany
Famerenana trano (tranokala)
Mamolavola endrika ny pejy fandraisam-bahiny ho an'ny tranonkala famandrihana mivantana.
Fanamboarana ny valin'ny fikarohana (tranokala)
Mamolavola endrika ny valin'ny fikarohana momba ny tranokala famandrihana mivantana.
Famerenana ny pejy momba ny fananana (tranokala)
Mamolavola endrika ny pejy momba ny tranokala famandrihana mivantana.
Manomeza interface tsara mandroso kokoa.
Hisintona & mitete amin'ny kalandrie
Avelao ny famandrihana sy ny famoronana daty voasakana amin'ny alàlan'ny Drag & Drop ao amin'ny Kalandrie famandrihana.
Fanatsarana ny plugin WordPress
Avelao ny famandrihana hatao amin'ny WordPress feno nefa tsy mamily ny mpitsidika ny motera Zeevou famandrihana.
Inbox Unified hitantanana fifandraisana amin'ny alàlan'ny mailaka, SMS ary fandefasan-kafatra Airbnb miaraka amin'ireo vahiny sy mpampiasa hafa.
Google Hotel Integration
Fampidirana ahafahan'ny zana famandrihana mivantana zaraina amin'ny Google Hotel Ads maimaimpoana ary hahazo fifamoivoizana avy amin'ny karoka Google Hotel / Map.
Hanavao ny UI
Mamolavola endrika ny fijery sy ny fahatsapana ny rafitra hanomezana endrika misimisy kokoa.
Inbox Unified (finday)
Fampiharana finday ahafahan'ny mpampiantrano mitantana ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fampiharana finday.
Fitsipika momba ny isa
Avelao ny fametrahana fitsipika mifototra amin'ny toe-javatra isan-karazany hanovana mavitrika ny vidiny, farafahakeliny & farafahakeliny farafahakeliny, fitantanana alina kamboty, ary hanakatonana ny daty tampon'ny fantsona.
Manamboara fitaovana ahafahana mitantana ny famandrihana voamarina mba hahazoana antoka fa voakarakara tanteraka ny vola.
Fanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala
Hatsarao ny haingam-pandeha ho an'ireo pejy maro ao amin'ny tranokala famandrihana mivantana.
Fanatsarana ny fampiharana trano
Mandefasa fandrindrana fandriana isaky ny famandrihana amin'ny mpikarakara trano
Ampio ny fahaizana manampy naoty isaky ny asa alefa amin'ny mpikarakara trano
Avelao ny fanaingoana ny ora amin'ny andro anaovana fampandrenesana any amin'ny mpikarakara tokantrano ho an'ny asa vaovao
Mitahiry cookies amin'ny solosainao ity tranonkala ity.
Ireto cookies ireto dia ampiasaina hanangonana vaovao momba ny fomba fifandraisanao amin'ny tranonkalantsika ary ahafahanay mahatadidy anao. Ampiasainay ity fampahalalana ity mba hanatsarana sy hanamboarana ny traikefanao amin'ny fizahana ary ho an'ny analytics sy ny metrika momba ny mpitsidika anay na amin'ity tranokala ity na amin'ny haino aman-jery hafa. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny cookies ampiasainay, jereo ny politika fiarovana fiainan'olona
Ekeo ny cookies